muva Silicone iraba isibe impahla ethandwa kakhulu. Kubaluleke ayinangozi. Imikhiqizo ezenziwe kusukela abicah iraba, amelana amakhemikhali amaningi. Lokhu kwenza esiyingqayizivele impahla. Ngoba bakwazi ukumelana imiphumela we-ozone, i-hydrogen peroxide, acid ehlukahlukene kanye alkalis, amaminerali amafutha, phenols kanye alcohols.
Njengoba ekhiqizwa iraba abicah ukushisa ukumelana? It is eyenziwe Izingxube elapha, okwakhiwa kwalo has a iraba. Njengoba zisetshenziswa nezinye izingxenyana ukwakhiwa okunjalo silicas, isibonelo, i-carbon ezimhlophe, Aerosil nokunye. Ngaphezu kwalokho, ingxube owawuvame ungeze excipients zobuchwepheshe kanye nezinye. Ezimweni eziningi, le yokuhlanganisa izinto ezinjengenkolo peroxides organic.
Ngo inqubo ekukhiqizeni abicah elastomer izinto ezinjalo Kumiswa, okuyinto has izakhiwo eziningi kuyazuzisa. iraba ukushisa ukumelana ihlukile kwezinye izinhlobo high nokuphila isikhathi eside. Ezindaweni eziningi, ezifana ezibalulekile. Ngaphezu kwalokho, iraba abicah isetshenziswa cishe kunoma iyiphi izimo lokushisa.
Ngaphezu kwalokho, i-elastomer, imiswe phakathi neminyaka ejenti sokwelapha okuyinto, kuba ngokuphelele non-enobuthi futhi inert izinqubo eziningi zezinto eziphilayo. Lokhu izinga ivumela ukusetshenziswa kwento kwezokwelapha, kanye embonini yezokudla.
Imikhiqizo ezenziwe abicah iraba esihle ukumelana okuphindaphindiwe lokushisa ukuchayeka. Le nto ayikwazi inzalo kanye, usebenzisa umoya oshisayo noma isisi.
Silicone iraba ishidi has a ebusweni, unikezwe adhesion ongaphakeme. Lokhu kuvumela zonke izinhlobo impahla ukwenza imiqulu ngoba ugingqe, bobunjwa ezinengilazi zokuthutha.
Phakathi izimfanelo zaLowo abicah iraba kufanele ukwaba ukumelana layo eliphezulu ukuze acid, alkalis, alcohols, futhi okungezona ubuthi, ezinhle kagesi ukwahlukanisa izakhiwo, nokugcina operability at + 400 ° C futhi kuyaqina at -100 ° C. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa abicah iraba kulezo zimo ukuthi elastomers bendabuko umane ungeme.
I ukushisa ukumelana abicah iraba iye osakazwa kabanzi njengoba kubekwe uphawu futhi ezinye izici, kanye ingaphandle cindezela ezishisayo. Kodwa akugcini lapho isicelo yalesi material. Silicone iraba ngokuvamile sisetshenziswa uphawu izinga for the okokubilisa lesithando imishini, izingxenye for zikagesi, lapho kukhona okusezingeni eliphezulu ezishisayo umthwalo kanye uzotshala hose. Kulokhu, okokusebenza nje Irreplaceable.
Futhi isetshenziswa njengoba impahla eluhlaza main ngokukhiqiza gaskets ukuthi bayakwazi ukumelana frost ezinzima noma ukushisa. Futhi, abicah iraba kuyinto impahla ekahle womshini base esitebeleni thermally for amayunithi ukubekwa uphawu kwabangu-amaphakheji.
Okwelapha Nokuhlinza Pharmaceutics
Ngenxa yokuphepha eliphelele, futhi omuhle kakhulu izakhiwo mechanical abicah iraba kusetshenziswa imithi futhi abekho embonini yokwenziwa kwemithi ukudala kuyo kanye nemikhiqizo kwenhlanzeko. Ngoba le nto ekhiqizwa ngaphandle kwalokho plasticizers, stabilizers nezinye izithasiselo ezilimazayo. Isibonelo kulokhu zingakhiqiza amathoyizi zezingane futhi pacifiers, izimila, catheters, lokufakelwa kwezitho, buso izinzwa kanye iphenya wezokwelapha.
Yonke imikhiqizo eyenziwe ukushisa ukumelana ukudla grade abicah iraba, sihlukile bikho ngisho nephunga, ehlanzekile okusezingeni eliphezulu, ukuhambisana bokuphila ne obala optical. Ngaphezu kwalokho, izinto umane nje akakwazi baxabane nomzimba. Umkhiqizo uyawathena, bakwazi ukuxosha amanzi hhayi kuphela, kodwa futhi uthuli. Ziyakwazi ukumelana ukucindezeleka ezishisayo. Lokhu kubenza bakwazi ngokuphindaphindiwe inzalo nge umusi ashisayo noma amanzi abilayo.
Okunye sphere kwesicelo
Silicone iraba isetshenziswa ukukhiqizwa yezimboni. Futhi zonke sibonga izakhiwo zayo eziyingqayizivele. Lokhu kwaziswa yasetshenziselwa embonini yezimoto. Kube isetshenziswa njengoba gaskets nezimpawu okukuvumela uxhumano ukuhlukanisa izingxenye. Okubaluleke kakhulu onikezwe ikhono lazo ukumelana ukuchayeka UV imisebe, anti-nqabela futhi amafutha ahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, gasket kufanele abe nenani elikhulu bafake ukumelana naso futhi kwenze okusezingeni eliphezulu amandla lokukhanda.
Ekuvikeleni futhi ikhebula elastomers kabanzi Ihluzo Elingafaki Ukuqoka. Njengomthetho, zenziwa yizo zonke izinhlobo imikhiqizo nje kuphela izinjongo zasekhaya. Ezenziwe izintambo abicah iraba, ezisetshenziswa imishini industrial, izinto zikagesi kanye namathuluzi amandla, okuyinto ukusebenza endaweni sasivumela nolaka.
Kuyini kompheme? Buxhomeke ngoba iminyango ingaphakathi nge kompheme
Hoods ngoba okugeza: imithetho Ukukhetha nokufakwa
Papillomavirus zangasese: izimbangela, imiphumela, ukwelashwa